Madaxweynaha Galmudug ‘‘Al-Shabaab waan ka xorreyneynaa deegaannada ay heystaan‘‘ | HalQaran.com
Home Warar Cusub Madaxweynaha Galmudug ‘‘Al-Shabaab waan ka xorreyneynaa deegaannada ay heystaan‘‘
Madaxweynaha Galmudug ‘‘Al-Shabaab waan ka xorreyneynaa deegaannada ay heystaan‘‘
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug, Mudane Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) ayaa ka hadlay deegaannada gacanta Al-Shabaab ku jira ee ka tirsan Galmudug, kadib isaga oo ka hadlaayay Xaflad lagu qabtay Magaalada Dhuusamareeb.
Qoorqoor ayaa sheegay qorshaha maamulkiisa inuu yahay xorreynta deegaannada ay gacanta ku hayaan Ururka Al-Shabaab ee ka tirsan dhulka Galmudug, si taasi loo gaarana loo baahan yahay wada shaqeynta shacabka Galmudug.
Madaxweynaha Galmudug, ayaa sheegay horumarada la gaaray in aanan la gaari laheyn haddii shacabka Galmudug aysan garab istaagi laheyn Maamulka, waxaana uu Bulshada ku dhiirageliyay sida hadda Maamulka ula shaqeeyaan inay sii kordhiyaan.
“Galmudug waxay qaadi doontaa howlgal ay cadawga kaga xorreyneyso deegaanada ay heystaan” ayuu ka yiri Munaasabadda Madaxweyne Qoorqoor.
Ururka Al-Shabaab ayaa gacanta ku haya deegaanno iyo Degmooyin badan oo ka tirsan Gobollada Mudug iyo Galgaduud, dadka degan deeganadaasina ma haystaan nidaamka dowliga ah ee Maamulka.